China Sports LED Display P Series ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |AVOE
မော်ဂျူးအရွယ်အစား 320*160 မီလီမီတာ
Super light 26Kg ပဲရှိပါတယ်။
P5/P6.67/P8/P10 အတွက် သင့်လျော်သည်။
လျှောက်လွှာ- ဘောလုံးကွင်းပတ်ပတ်လည်၊ ဘတ်စကက်ဘောကွင်းပတ်ပတ်လည်၊ အားကစားလှုပ်ရှားမှု စသည်တို့။
အားကစားကွင်း LED ဖန်သားပြင်များသည် အထူးသဖြင့် ဘောလုံးကွင်း သို့မဟုတ် ဘတ်စကက်ဘောကွင်းများအတွက် လူစည်ကားသောနေရာများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။၎င်း၏ အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ကြည့်ရှုထောင့်များသည် အားကစားကွင်း၏ ထောင့်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို သေချာစေသည်။
Sports Peripheral LED Screen Display သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အကျယ်နှင့် တိုတောင်းသော အမြင့်ရှိသော ဧရာမနဖူးစည်း LED display တစ်ခုဖြစ်သည်။အရံ LED ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာဘုတ်သည် အသက်ဝင်နေပြီး အားကစားကွင်းအတွင်းရှိ အားကစားကွင်းတစ်ခုလုံးရှိ LED ဖန်သားပြင်များတွင် အဆက်မပြတ်ကြော်ငြာစာများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုဂိုများကို ပြသထားသည်။ဘောလုံးကွင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သည့် ရွေ့လျားမှု LED မျက်နှာပြင်အကွာအဝေးသည် တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် လွယ်ကူသည်။LED မျက်နှာပြင်သည် ရေစိမ်ခံနိုင်ပြီး အားကစားကွင်းပတ်ဝန်းကျင် (ရေ၊ မိုး၊ ဖုန်များ) ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးနိုင်သည်။
1. IP65 ရေစိမ်ခံ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ လေဒဏ်၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကို ချိန်ညှိနိုင်သော၊ မတူညီသောကြည့်ရှုထောင့်မှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြည့်ရှုဂိမ်းများကို သေချာပါစေ။
3. Mg Alloy die-cast ဗီရို၊ ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော၊ မြှုပ်ဖယ်ထားသော၊ အငှားအဆင့် LED မျက်နှာပြင်အတွက် သုံးနိုင်သည်။
4. ပျော့ပျောင်းသောမျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု၊ အားကစားသမား၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေရန်ကာကွယ်ရန်နှင့် LED မီးလုံးသည်အလွန်အမင်းမကွဲစေပါ။
1. ပြင်ပအားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင်ပြသမှု
1. ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အမှတ်စာရင်းများ
စပွန်ဆာကြော်ငြာများ၊ တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုများ၊ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်များကို ကြီးမားသော LED ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြသနိုင်ပါသည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကိုလည်း အမှတ်ပေးဇယားအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။သင့်ကွင်းပတ်ပတ်လည်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်သည်။ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုတည်းတွင် ကြော်ငြာအများအပြားကို ပြသရန် LED အရံမျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင်၏စပွန်ဆာသည် ၎င်း၏အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ကာ ပံ့ပိုးကူညီသူ အယူအဆအသစ်ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘောလုံးကစားနေစဉ်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှကာကွယ်ရန် LED ဗီရို၏ထိပ်ရှိ အထူးအီဗာအကာအကွယ်ကူရှင်။ကစားသမားနှင့် ဘောလုံးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်း၏ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆီလီကွန်ရော်ဘာမျက်နှာဖုံး။တည်ငြိမ်သောကိုယ်ထည်သည် မျက်နှာပြင်ကို မြန်နှုန်းမြင့်ဘောလုံး သို့မဟုတ် ဘောလုံးဘောလုံးများပင်လျှင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အနောက်ဆွဲကွင်းပါရှိပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် အဆင်ပြေသည်။ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိ ကွင်းစကိတ်ကို ဆွဲယူရုံဖြင့် အားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင်ကို မြေပြင်ပေါ်တွင် ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။
အားကစားကွင်း LED ဖန်သားပြင်တွင် မြင်ကွင်းကျယ် 140° ပါရှိပြီး ပရိသတ်များ ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ရုပ်ပုံအရည်အသွေးသည် လမ်းကြောင်းများနှင့် အကွာအဝေးအားလုံးတွင် ချောမွေ့စွာတည်ရှိနေပြီး တူညီသောအရည်အသွေးမြင့်ထွက်ရှိမှုကို ပရိသတ်အားလုံးကို တင်ဆက်ပေးပါသည်။ဒါက ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
4. မြင့်မားသော IP အဆင့် & လုံခြုံ & ယုံကြည်စိတ်ချရသော
SMD P8 သို့မဟုတ် P10 ပြင်ပအားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင်သည် ရေစိုခံခြင်း၊ ဖုန်ဒဏ်ခံခြင်းနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ပြင်ပအသုံးပြုမှုသေချာစေရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။မြင့်မားသော IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အရည်အသွေးမြင့် output ကိုသေချာစေသည်။
အားကစားကွင်း LED စခရင်တွင် တောက်ပမှု 6000cd/sqm အထက် ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိသည်။တပ်ဆင်ဧရိယာ (Option) အရ တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိပါ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ထုတ်ကုန်၏ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန်အတွက်၊ အဆင်ပြေသော သိုလှောင်မှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုအတွက် Flight Case တွင် ထုပ်ပိုးထားသည်။
ယခင်- အငှား LED Display R စီးရီး
နောက်တစ်ခု: အားကစားကွင်း LED မျက်နှာပြင်
Color Sport Led Display ၊
အားကစားအတွက် ကြီးမားသော LED မျက်နှာပြင်
အားကစားအတွက် LED မျက်နှာပြင်
Outdoor Sport Led Display ၊
ပြင်ပ အားကစား မျက်နှာပြင်
ပြင်ပအားကစား LED မျက်နှာပြင်
Sport Led Display ၊
P2 Indoor LED Module B
Led မျက်နှာပြင် Outdoor Led Display ၊ LED ရုပ်ထွက် Led Display မျက်နှာပြင် ဆိုင်းဘုတ် Outdoor Led မျက်နှာပြင်